Ịzụ a n'ụlọ na ego ma ọ bụ na a nnyefe | Mortgage Loan na Mortgage Refinance
Anyị kwesịrị ịzụ ụlọ na ego ma ọ bụ na a nnyefe.
Ụfọdụ ego ọkachamara na-ekwu na shoppers kwesịrị inwe 100 percent ụgwọ-free. Ọ dịghị kaadị akwụmụgwọ. Ọ dịghị ụgbọ ala mgbazinye ego. Ọ dịghị ụgwọ nke ụdị ọ bụla maka ihe ọ bụla reason.That pụrụ ịbụ a ụzọ smart ndụmọdụ ruo mgbe ajụjụ nke ịzụ a n'ụlọ abịa. Na mgbe ahụ, na ụgwọ free ndụ nwere ike inwe na-abụ nsogbu.
Na 2014, dị nnọọ 5 percent nke mbụ oge homebuyers nwetara a n'ụlọ na-enweghị a nnyefe, dị ka kwa a nyochaa site National Association nke Realtors. Ụfọdụ beginners-esi na ha n'ụlọ dị ka ngọzi, Ya mere, ndị ga esi nwere ike ikwu na ọbụna n'okpuru 5 percent achọpụtabeghị otú ewepụta ego zuru ezu iji ịzụta a n'ụlọ si na. Nke ahụ abụghị na ọ dịghị onye, kama ọ bụ obere ịkpụ nke nchịkọta ọha nke mbụ oge purchasers.
Great Ebe E Si Nweta pụrụ inyere gị aka ịzọpụta puku na gị nnyefe.
Akwụ ụgwọ na nkịtị?
Otu nke ego ọkachamara, Dave Ramsey kwuru na ọ ga-abụ ihe kasị mma usoro ma ọ bụrụ na-akwụ ụgwọ ego maka a n'ụlọ. Mgbe ahụ e nwere Ramsey si Fans kwuru na ịzụ a n'ụlọ na ego adịghị a anwansi na ọ bụ adịghị mfe. Ịzụ a n'ụlọ na ego, bụghị nnyefe nwere ike mere n'ihi homebuyers nwere ọrụ ike na ịdọ aka ná ntị.
Na eziokwu, Fans kọrọ na ha ugwo ego maka na zubere ime dị ka n'okpuru;
• Financing na-akwụ ụgwọ anya a Starter n'ụlọ mbụ.
• Inwe a n'ụlọ onwe ha na-akwụ ụgwọ ego maka ihe mgbe oge ụfọdụ.
• Azọpụta na inye onyinye ruo ogologo oge tupu ịzụta.
• Ịzụchapụta a $14,000 fixer-elu ma na-eme rụziri mgbidi onwe ha.
• Ibi a ikwu n'ụlọ mgbe ha nwara zuru ezu mapụtara ịzụta.
Ị mkpa Ebe E Si Nweta iji nweta Ebe E Si Nweta
Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na usoro nke na-akwụ ụgwọ ego anaghị arụ ọrụ maka ha, homebuyers nwere ezute na ihe isi ike nke na-a nnyefe ego n'ihi na ha mgbe nwere Ebe E Si Nweta na niile. Ha na-adịghị ọjọọ Ebe E Si Nweta ma ha enweghị Ebe E Si Nweta, Neill kwuru. “Ha na-na iwere a Dave Ramsey N'ezie ma ọ bụ mere ụfọdụ ọzọ ụdị ego atụmatụ na ndụmọdụ bụ, 'Unu na-akwụ kaadị akwụmụgwọ, akwụ ego nkịtị.’ Nke ahụ bụ kediegwu nduzi ruo mgbe ọ bụ oge na i nwere ikwu na nnyefe agbazinye mmadụ ego ụgwọ iji nweta prequalified na ha na-ekwu, 'Ọ bụghị otu ihe iseokwu n'ime unu na-a 500 n'aka fim. Ọ bụ ihe nke nke na ị gaghị enwe ihe ọ bụla Ebe E Si Nweta na niile.
Ọzọ isiokwu na Ramsey si website na-ekweta na ya “100 Percent Down Plan” nwere ike ịbụ nke iru n'ihi na ụfọdụ. Na ikpe, homebuyers na-gwara-echere iji nweta a nnyefe ruo mgbe:
• Ha na-na ụgwọ-free.
• Ha nwere dịkarịa ala atọ na ọnwa isii nke mmefu na mberede ego.
• Ha nwere ala ugwo nke dịkarịa ala 10 percent, na ọkacha mma 20 percent.
• Ọ bụrụ na di na nwunye, ha na a na-akwadebe ụgbọ maka dịkarịa ala otu afọ.
“Ọ bụrụ na ị na-agaghị na-akwụ ụgwọ ego, na-a ofu-ọnụego nnyefe maka 15 afọ ma ọ bụ obere. Na-ịkwụ ụgwọ gị ala — ọ dịghị ihe karịrị 25 percent nke gị na-ahụ-n'ụlọ-akwụ,” isiokwu na-adụ ọdụ.
Imeru ihe n'ókè na Ebe E Si Nweta
Financial nhazi, dị ka Bob Morrison, a isi na Downing Street Àkù Management na Littleton, Colorado, na-ekwu na-eji ọkụ kwesịrị izere overusing ma ọ bụ underusing Ebe E Si Nweta.
“Nọmalị, (ịzụ a n'ụlọ) na-achọ Ebe E Si Nweta, otú guzosie ike n'aka maka na dị ezigbo mkpa,” Morrison na-ekwu. “Ị na-achọghị na-aga crazy na ịzụta ihe ndị na-n'ime gị n'aka, ma n'otu oge, iji Ebe E Si Nweta akọ bụ ihe amamihe.”
Ronit Rogoszinski, akụ na ụba ndụmọdụ maka Njiko Financial Group na Ogige City, New York, na-ekwu ịbụ “zeroed mkpu ma ọ bụ maxed si” na Ebe E Si Nweta “adịghị eme ka chọpụta ma ụzọ.”
“Ị nwere ike-efu efu ohere ma eleghị anya ịzụta a n'ụlọ na ị nwere ike iru hara nhatanha na ma eleghị anya, nwere dị ka gị ketara ụmụ gị,” Rogoszinski-ekwu. “The ókè dị adịghị arụ ọrụ.”
2 Ebe E Si Nweta akara nhọrọ
Homebuyers na-adịghị enwe n'aka ma ọ bụ onye Ebe E Si Nweta faịlụ bụ oke mkpa n'ịwa a Ebe E Si Nweta akara abụọ nhọrọ, na-ekwu Greg Cook, nnyefe ọkachamara na Platinum Home Mortgage na Temecula, California.
Alternative Ebe E Si Nweta nhọrọ
Otu nhọrọ bụ ịmepụta otu ọzọ Ebe E Si Nweta akụkọ ihe mere eme si ego ndị ọzọ ndia, dị ka ụgwọ ụlọ akwụkwọ ndenye ego, mkpuchi premiums na ịba uru ego. Usoro a bụ na-ewe oge na ike na-ọtụtụ ọnwa iji wuchaa, na Cook-ekwu abụghị na niile lenders nwere ego na-eme ya.
Ihe bụ ihe ọzọ, ọ na-ekwu, nsonazụ ahụ “na-agaghị abụ oké akara” n'ihi na ọzọ Ebe E Si Nweta akụkọ ihe mere eme na-agaghị na-akpa azụ ihe karịrị abụọ ma ọ bụ afọ atọ. Ọ pụtara na onye na-azụ ga-eleghị anya akwụ elu mmasị ọnụego maka a Home ego karịa onye nwere ezi omenala Ebe E Si Nweta akụkọ ihe mere eme.
The ọzọ nhọrọ bụ iji nweta a kaadị, ana a obi umeala nchikota na-eme ka ọ dịkarịa ala kacha nta ugwo maka dịkarịa ala ọnwa isii, opekempe oge dị mkpa n'ịwa a FICO akara.
The akaụntụ ga-agbagha na kọọrọ ndị Ebe E Si Nweta bureaus na-apụghị metụtara ọ bụla na akaụntụ njide onye e kọrọ dị ka nwụrụ anwụ, dị ka MyFICO.com.
“N'adịghị ka ọzọ Ebe E Si Nweta, Ọ bụ n'ezie Ebe E Si Nweta,” Cook-ekwu. “Ọ bụrụ na ị nwere ọnwa isii’ akụkọ ihe mere eme na abụọ na-arụsi ọrụ ahia edoghi na ihe ọ bụla ọzọ bụ iji, ị nwere ike nke ọma ga-esi a (ego) ihu ọma.”
Ọ bụrụ na ọ kwe omume, akwụ ego nkịtị. Bụrụ na ọ bụghị, ịzụta a n'ụlọ na a nnyefe.
Tagged on: nnyefe mortgages
← Ihe i nwere Maara Tupu Mortgage Refinance | Refinance nnyefe, nnyefe Refinance, Refinance, Refinancing
Ihe mara tupu tupu ruo eru maka a nnyefe | ide maka a nnyefe, nnyefe, mortgages, ego, mgbazinye ego →
Real Estate ịkwụsị, ọbụna na a nnọọ obere ọnụ ọgụgụ, anọgide a gbalịrị na ezi n'ọnụ ewu ihe mmadụ usoro ego na akụ na ụba.